Bit By Bit - Ethics - 6.7.1 The IRB bụ a n'ala, ọ bụghị a n'uko
Ọtụtụ ndị nnyocha yiri ka jide emegiderịta echiche nke IRB. Na otu aka, ha tụlee IRB na-a bumbling ndioru govanmenti. Ma, n'otu oge ahụ, ha na-atụle ihe IRB na-ikpeazụ kpeziere nke mkpebi ndị metụtara ụkpụrụ. Ya bụ, yiri ka ha na kweere na ọ bụrụ na IRB-anakwere ya, mgbe ahụ ọ ga-OK. Ọ bụrụ na anyị na-ekweta na dị nnọọ adị n'ezie-agaghị emeli nke IRBs dị ka ha nwere ugbu a-na e nwere ọtụtụ n'ime ha (Schrag 2010; Schrag 2011; Hoonaard 2011; Klitzman 2015; King and Sands 2015; Schneider 2015) -then anyị dị ka na-eme nnyocha ga-on ọzọ ọrụ maka ụkpụrụ ọma ndị anyị research. The IRB bụ a n'ala bụghị a n'uko, na nke a echiche nwere isi ihe abụọ pụtara.
Akpa, IRB bụ a n'ala pụtara na ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ihe alụmdi na-achọ IRB nyochaa, mgbe ahụ i kwesịrị iso ndị iwu. Nke a nwere ike iyi ihe doro anya, ma m na-chọpụtala na ụfọdụ ndị yiri ka ha chọrọ izere IRB. N'eziokwu, ọ bụrụ na ị na-arụ ọrụ na ethically-edozibeghị ebe, ndị IRB pụrụ ịbụ ụzọ dị enyere Devid aka. Ọ bụrụ na ị na-eso ha iwu, ha ga-ada n'azụ gị kwesịrị ihe na-aga-ezighị ezi na gị nnyocha (King and Sands 2015) . Na, ọ bụrụ na ị na-adịghị agbaso iwu ha, ha pụrụ ị na-esi na gị onwe gị na-ata ike ọnọdụ.
Nke abụọ, IRB bụghị a n'uko pụtara na dị nnọọ dejupụta gị iche-iche na-esonụ iwu na ezughị. Ọtụtụ mgbe, ị dị ka ndị na-eme nchọpụta bụ onye maara ihe kasị banyere otú ime ethically. Mee elu mee ala, ị bụ onye nchọpụta na usoro ziri ezi ibu ọrụ dabeere n'aka gị; ọ bụ aha gị na akwụkwọ.
Otu ụzọ ị hụ na ị na-emeso ndị IRB dị ka a n'ala na-adịghị a n'uko bụ na-agụnye ihe usoro ziri ezi odide ntụkwasị gị akwụkwọ. N'ezie, i nwere ike dee gị usoro ziri ezi odide ntụkwasị tupu ị na-amụ ya ebido iji amanye onwe gị na-eche echiche banyere otú ị ga-akọwa ọrụ gị ndị ọgbọ gị na ọha na eze. Ọ bụrụ na ị chọpụta na ị na-ata mgbe ede gị odide ntụkwasị, mgbe ahụ, ị ​​na-amụ nwere ike ọ gaghị egbu ndị kwesịrị ekwesị usoro ziri ezi itule. E wezụga inyere gị ịchọpụta na gị onwe gị ọrụ, na-ekwusara gị usoro ziri ezi appendices ga-enyere ndị nnyocha obodo-atụle usoro ziri ezi okwu na guzosie ike kwesịrị ekwesị norms dabere na ihe atụ si ezigbo ahụrụ anya nnyocha. Isiokwu 6.3 ugbu ahụrụ anya research akwụkwọ na m na-eche nwere ezi mkparịta ụka nke nnyocha ụkpụrụ ọma. M na-ekwekọrịtaghị na bụla na-azọrọ site ndị dere na ndị a mkparịta ụka, ma ha niile na-ihe atụ nke na-eme nnyocha ka onye ji ike n'ezi n'echiche kọwara Carter (1996) : n'ọnọdụ ọ bụla, na-eme nnyocha (1) na-ekpebi ihe ha chere bụ aka nri na ihe ọjọọ; (2) ha na-eme ọ bụ ihe ha kpebiri, ọbụna mgbe ọ na-eri; na (3) ha n'ihu ọha gosi na ha na-eme dabere na ha usoro ziri ezi analysis nke ọnọdụ ahụ.
Isiokwu 6.3: akwụkwọ na-akpali mkparịta ụka nke ụkpụrụ ọma ndị ha research.
Rijt et al. (2014) ubi nwere na-enweghị nkwenye
-ezere Contextual nsogbu
Paluck and Green (2009) ubi nwere na-emepe emepe
nnyocha na enwe mmetụta ọsọ ọsọ isiokwu
mgbagwoju nkwenye mbipụta
remediation nke kwere omume Harms
Burnett and Feamster (2015) research na-enweghị nkwenye
guzozie ize ndụ na abamuru mgbe ihe ize ndụ na-esi ike gụpụta
Chaabane et al. (2014) -elekọta mmadụ pụtara research
eji leaked data files
Jakobsson and Ratkiewicz (2006) ubi nwere na-enweghị nkwenye
Soeller et al. (2016) -emebi usoro nke ọrụ